Nayakhabar.com: दिल्ली उडे देउवा, के होला भ्रमण पछि ?
दिल्ली उडे देउवा, के होला भ्रमण पछि ?
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच दिने भारत भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ गएका छन् । इन्डिया फाउन्डेशनले गोवामा गर्न लागेको कार्यक्रममा सहभागी हुन देउवा भारत गएका हुन् । बिहान ८ बजे नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा नयाँदिल्ली गएका देउवा आज नै गोवा पुग्नेछन्। देउवाले पत्नी आरजुलाई पनि साथमा लिएर गएका छन् ।
गोवामा हुने इन्डिया फाउण्डेशकको कार्यक्रमपछि नयाँदिल्ली फर्किएर उनी राजनीतिक भेटघाटमा रहनेछन्। यद्यपि भेटघाटको तालिका भने बनेको छैन। देउवाले भारतमा रहँदा उच्चा राजनीतिक भेट गर्ने छन् ।
भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० निकट रहेको थिङ्क ट्यांक ‘इन्डिया फाउन्डेसन’ले १९ कात्तिकको बेलुकी गोवामा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा देउवाले प्रजातन्त्रका विषयमा प्रमुख वक्ताको रुपमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छन्।
मधशी दलहरुसँगको वार्ता सकरात्मक दिशामा अगाडि बढेको तथा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह र्काी विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बेला देशको सवैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्ष देउवाको भारत भ्रमणलाई चासोका सथ हेरिएको छ ।
भ्रमणमा देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, प्रतिपक्ष कांग्रेस नेतृ सोनिया गान्धिसहितका भारतीय नेताहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। देउवाले गोवामा स्वामी तेजो महानन्द, रेलमन्त्री सुरेश प्रभु, भाजपा अध्यक्ष अमित साहसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। देउवाले भाजपा महासचिव राम माधवलाई समेत भेट्ने कार्यसूचि छ।
यस अघि देउवाले गत यसैबर्षको वैशाख ६ गते पनि चार दिने दिल्ली भ्रमण गरेका थिए। पत्नी आरजु देउवाको उपचार गर्न उनी दिल्ली गएका थिए। तर, त्यहाँ उनको राजनीतिक भेट पनि भएको थियो ।
त्यसअघि देउवाले ०७२ मा साउन १३ साउनदेखि पाँच दिने दिल्ली भ्रमण गरेका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसकै नेता विमलेन्द्र निधि भने हिजो साँझ नेपाल फर्केका थिए । उनी विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी एसियाली मन्त्रीहरुको सम्मेलनमा सहभागि हुन नयाँदिल्ली गएका निधि थिए ।